Jawaab:Mala ogolyahay in arooska laga ciyaaro?
Assalamu calaykum; Walaal Khadro arooska in laga ciyaaro ama laga buraanburo ama laga ciyaaro ciyaaraha dhaqanka waxba kuma jabna, kaliya waxaa loo baahanyahay in la ilaalsho aadaabta islaamka oo aanan la falin wax sharcigu diidayo.
Marka gabadha aad sheegtay haddii ay doonayso in ay arooskeeda ugu yeerto dumar kaliya ama dumar iyo rag intaba way bannaantahay, haddii arooskaas ka ciyaarayaanna waxba kuma jabna, laakiin dumarkuna meel u gaar ah ayay ku ciyaarayaan ragguna meel u gaar ah ayay fariisanayaan.
- Tuesday, January 03, 2006 at 17:06:08 (CST)
Su'aal:Mala ogolyahay in arooska laga ciyaaro?
Aslaamu calykum waraxma, sheek slaantaas islaamka kadib sheekh waad kumahas santahay sida wanaaga badan eed iigu soo jawaaabtay illlahay ajar ha kaasiiyo. Sheek waxaaan kaloo jaclhay in aan kuwaydiiyo, gabar ayaaa waxay rabtaaa in ay aroos samaysato waxay jaceshahay in ay san arooskeeda isku keenin dad ajanabi ah macnihii dad rag iyo dumar, laakiin waxay rabtaaa in ay gabdhuhu uciyaaraan ciyaarkasta gabdhaha kaliya marka mala ogal yahay in arooskii laga ciyaaro ciyaarkasta sida buranburka, music, iyo iwm. marka mabanaantahay taas. jisaa kalaahu khayr. Aslaamu calaykum waraxma.
- Tuesday, January 03, 2006 at 17:01:23 (CST)
Jawaab: Sheekhow gabar aan isjeclayn ayaan dagaalnay ee maxaa talaa?
Assalaamu Calaykum: walaal gabadha aad sheegtay haddii waalidkeed kula jecelyahay, isku day in aad waalidka ku qanciso in ay gabadha kugu daraan.
Kolka ay gabadhu naagtaada noqoto oo lagugu daro ayaad markaa xaq u leedahay in aad gabadha waydiisankartaa wixii xuquuq ah ee aad ku leedahay, laakiin maadaama aanay kugu xirnayn gabadhu waa xor wixii ay doonto bayna ka yeelaysaa jacaylka aad sheegayso.
Marka anigu waxaan kugula talinlahaa in aad xagga reerka ka soo gasho maadaama ay kula jeclaayeen oo aad waydiisato in ay gabadha isku kiin daraan, gabadha ku dheh horta aan isguursano kadibna waan ka heshiinaynaa waxyaabahaas khilaafka ah ee yaryar, waxaad ku dhahdaa haddii aad i guursato wixii hore oo dhan waa laga gudbayaa, maxaa yeelay markaas adiga ayaa i leh oo ninkaagii baan noqonayaa.
- Sunday, January 01, 2006 at 06:23:51 (CST)
Su'aal: Sheekhow gabar aan isjeclayn ayaan dagaalnay ee maxaa talaa?
Sheekh ilahay khayr ha kaa siyo su'alaha aanu ku waydiino iyo jawabaha hufan ee aad na sisid.
sheekh su'ashani waxa ay noqonaysaa: Gabar ayaan is baranay mudo badana si fiican ayay xirir u wada lahaynay, marna soomaliya ayaan wada joognay marna dibadaha ayaan ku kala maqnayn mana malaynaysid sida anu isu jeclayn in dad la midihi joro, waxa aan ku oran karaa mararka qaar waa isu ilmayn jirnay annaga oo wada jogna amma talafoon dibada ku wada hadlayna balse waxa aan ku balanay in anu is guursano isna sugno iyada oo gabadhu u kici tintay wadanka marayanka anna aan jogo somaliya intii aan kala maqnayn waa wada xiriraynay walibana waxaa dheer walidka dhanka inanta oo ila jeclaa inanta ilana donayay iyana kula dardarmay sidii xaalku u ficna ayaa waxa igu adkatay in mudada aan sugo inta ay sharci helayso ama imanayso kadib gabarkale ayaan is baranay wanan guursaday lakiin anoon jacaylkii hore ilaabin ayaan malinkasta xasuusanayay kadibna gabadhii kale waa is dirirnay wanan furay tii aan jeclaa ayaan ku labtay xaal iyo rali galin ayaan ku sinayaa ayaan iri lakiin iyada oo irabta oo i jecel ayay hadana waxa ay i tiri waa digii igaga baxay marka kuma rabo hadaba shekhow gabadhasi waan rabaa iyaduna waa ay i jeceshahay lakiin colaad ayay iga qaaday arintii aan sameyay maxaa talaa?
xasan adam <soomali2>
- Sunday, January 01, 2006 at 06:18:25 (CST)
Jawaab: Sheekh Cabdulqaadir caqiidadiisa qofkii haysta ma toosanyahay?
Assalaamu calaykum: walaal sheekh cabdulqaadiir wuxuu qoray laba kitaab midka aad sheegtay ee ah: (al-qunyah ladalibi dariiqil xaq) iyo (futuux al-qayb), labadaa kitaab waxaa sheekhu ka buuxshay axaadiis daciif ah oo badan, sidaa darteed caqiidadiisu ma caan bixin, laakiin waxaa caan baxday dariiqadiisa tasawufka.
Waxaa taas la jirta in Sheekh Cabdulqaadir loo nisbeeyay waxyaabo uusan dhihin oo kutubtiisa laga buuxshay hadal aanan mad-habtiisa la soconkarin, taasna waxaa loo aanaynayaa in mutacasibiintii xambaliyada qaarkood ku dareen kutubtiisa waxyaabo uusan sheekho aaminsanayn oo uusan dhihin.
Marka sida muslimiintu caado ka dhigteen oo culumadeennii yeeli jireen, waxay qaadanjireen caqiidada Imaam Ashcari iyo dariiqada sheekh cabdulqaadir al-jiilaani.
- Sunday, January 01, 2006 at 06:10:58 (CST)
Su'aal: Sheekh Cabdulqaadir caqiidadiisa qofkii haysta ma toosanyahay?
Salam calycum... Sheekh sida aan u arko waxaad ku takhasustey caqiidad. Marka anigu waxaan wataa suaal ku saabsan babkaas: Hadii qofku caqiido ka dhigto sida sh. c/qaadir jeylaani ku dhigey kitaabkiisa "Alqunya" baabka caqaayedka uuna ilaah kala hortago taas ma saxsanyahy qofkaasi mise waa baadi? maxaad se kula talin laheyd?
- Sunday, January 01, 2006 at 06:05:14 (CST)
Jawaab: Lacagta daynta ah ee ardayda la siiyo ma la qaadan karaa?
Asalaamu calaykum: walaal lacagta aad sheegtay haddii aadan haysan wax kale oo xoolo ah oo aad jaamicadda ku gasho waad dayman kartaa waadna qaadankartaa.
Haddii aad wax ku baranayso qaado walaal lacagtaas, laakiin haddii aadan wax ku baranayn ha qaadan si aad uga fogaato shakigeeda maadama aanay baahi badan kuu hayn.
- Friday, December 30, 2005 at 07:00:01 (CST)
Su'aal: Lacagta daynta ah ee ardayda la siiyo ma la qaadan karaa?
asc wr wbk sheekh salaan ka bacdi, waxaan illah kaga rajeynaya inuu ka abaal mariyo sida wanaagsan ee diintiisa ugu dadaaleysid. Waxan rabey inaan wax ka ogaado in ey banantahay in laqaato lacagta wax lagu barto wadamada yurub ee ka kooban qeyb deen ah iyo mid deeq ah. tan deenta ah waxaa hadhoow la bixinayaa iyadoo wadata korsaar. wabilaahi towfiiq.
- Friday, December 30, 2005 at 06:56:25 (CST)
Jawaab: Haweeynay ayaa waxay ninkeedii kala maqnaayeen 14-sano..
Asslaamu calaykum: walaal gabadha ninkeedu dhintay ayada oo aan muddo dheer war laga helin, waxay tirsanaysaa cuddadii dhimashada oo ah in ay basaasto afar bilood iyo toban maalmood.
Taasi waa haddii aanay furriin doonin intii ninkeedu maqnaa oo la la'aa. Haddiise ay furriin doonato kolkii ninkeeda ay waysay afar sano ama wax ka badan, oo uusan xoolo lahayn laga masruufaayo naagtiisa, ee ay markaa iska furto, haddii ay kolkaa geeridiisa maqasho waxba xil ah kama saarra, haddii ay noloshiisa maqashana sidoo kale.
Laakiin xaaladda aad hadda iisheegtay taas ma aha, oo waxaad tiri gabadhu way sugaysay muddadaas akhbaarta ninkeeda, oo hadda ayay ogaatay in uu geeryooday, taasi marka macnaheedu waa in ay naagtiisa ahayd muddadaas oo dhan oo ay nikaaxiisa ku jirtay, sidaa darteed, way cuddo tirsanaysaa afar bilood iyo toban maalmood kadibna ninkii ay doonto ayay guursanaysaa.
- Friday, December 30, 2005 at 06:51:34 (CST)
Su'aal: Haweeynay ayaa waxay ninkeedii kala maqnaayeen 14-sano..
A/c marka hore shiikha iyo inta la shaqaysa waxan leeyahay allaah khayr ha idinku jazeeyo. shiikh waxaan waydiin "haweeynay ayaa waxay ninkeedii kala maqnaayeen 14-sano oo aysan is arag hadda ayaa waxaa loo sheegay in uu 6-bilood mootanyahay ama 6-bilood ka hor dhintay. xugunkeeda waa maxay haweenaydaas ma u basaasn mase maya?
- Friday, December 30, 2005 at 04:59:29 (CST)
Jawaab: Sheekhow qalbi adayg ayaan isku arkay ee maxaan akhristaa?
Assalaamu alaykun: Khadro walaal waxaan kugula talinayaa in aad cibaadada iyo xusidda Eebbe badsato. Qofka qalbigiisu wuxuu qallalayaa oo adkaanayaa marka qofku ka tago ama yareeyo cibaadada iyo xusidda Ilaahay. Xusidda Ilaahay ayaa qalbigu ku qaboobayaa sida quraanku inoo caddeeyay, marka walaal waxba kale kaama khaldana ee waxaad u baahantahay in aad xusidda Eebbe badsato oo aad habeenkasta waqti aad Eebbe ku xasuusato oo aad salaaddaada sunnada ah ku tukato samaysato.
Marka waxaan kugula talinayaa in aad habeenkii gelinka dambe u kacdo salaatullaylka oo aad saacad aad Eebbe ku xusto habeen kasta u toostid.
Haddii ay ku dhibayso kicidda habeenka qaybtiisa dambe, waxaad tukataa salaatullaylka cishaha ka dib kadibna saacad soo jeed aad xusaysid Ilaahay oo aad ama quraan akhrisatid ama aad wardi akhrisatid.
Haddii aad u baahantahay ducooyin saxiix ah oo qoraal ah cinwaankaaga boostada iigu soo dir email si aan kuugu soo dhiibno buug ay ku qorantahay duco dhaxalgal ah oo aad akhrisatid.
- Wednesday, December 28, 2005 at 18:15:54 (CST)
Su'aal: Sheekhow qalbi adayg ayaan isku arkay ee maxaan akhristaa?
Aslaamu calaykum waraxma, salaantaas islamaka kadib, shekh ayaantaan waxaaan isku arkay in mudo ah in aanan baqin, naxin, sametimes waxaan dhahaa naxariistii ayaa kaa guurtay, sheekh hadii la ii sheego waxa naxdin leh, like familyga kusaabsan ma naxayo, marka sheekhoow maxaa iga qaldan? maxaan suubiyaa? sidaan awal isu aqanay qof dhiban hadaan arko waan u naxi jiray oon ooyi jiray laakiin hada waan agagay shekh, sheekhoow maxaan akhrisataaa.
- Wednesday, December 28, 2005 at 18:09:17 (CST)
Jawaab: Sunniyaha ma la yaraysan karaa, xaadda wajigase ma layska xiiri karaa?
Assalaamu Calaykum: Walaal Dulmar, haweenka waxaa u bannaan in ay iska xiiraan timaha jirka oo dhan meeshii ay doonaan ha ku yaalleene intaan Madaxa ahayn, xaddiiska al-Bukhaari iyo Muslim ee Lacnadaya haweenka ilkaha fiiqada iyo kuwa sunniyaha xiirta iwm waxaa looga jeedaa kuwa aanay u bannaanayn isqurxintu sida haweenayda laga geeryooday iwm. Arrinkaasna waxaan ka ogaanaynaa, ummul mu'miniin Caa'isha ayaa sheegtay in uu bannaanyahay arrinkaas, marka ayada ayaa amuurahaas ka og asaxaabta kale.
Culumada fiqhiguna waxay dhaheen xaddiiska al-Bukhaari iyo Muslim soo weriyeen iyo Hadalka Caa'isho laga soo weriyay isburrinmayaan, maxaa yeelay, xaddiiskaas wuxuu ku saabsanyahay haweenka aan loo ogolayn in ay isqurxiyaan sida haweenayda laga dhintay iwm.
Sidaa darteed, way bannaantahay in sunniyaha la gaabsho ama la jaro, sidoo kale way bannaantahay in xaadda wajiga iyo midda lugaha la iska xiiro, waxaan haweenka u bannaanayn in ay madaxa xiiraan. Khayr baan kuu rejaynayaa.
- Wednesday, December 28, 2005 at 17:29:45 (CST)
Su'aal: Sunniyaha ma la yaraysan karaa, xaadda wajigase ma layska xiiri karaa?
Asalaamu calaykum, sheekh Xawaajibka ama suuniyaha ma la yaraysan karaa. Su'aasha labadna: Xaada wajiga ma la xiidhi karaa? mahadsanid.
- Wednesday, December 28, 2005 at 17:23:09 (CST)
Jawaab: Wiilal habaryartay dhashay ma ka xijaabanayaa?
Assalaamu calaykum: Walaal Mashaacir, wiilasha habaryartaa dhashay ee aad soo korisay ma aha maxram (sokeeye dhow) sidaa darteed waa in aad ka xijaabato oo aad gashato dhar cowrada qarinaya haddii ay qaangaaraan.
Haddii aad adigu soo korisay, taasi waxba ka bedeli maysio xukunka sharciga ah haddii aadan nuujin intii ay yaryaraayeen.
Marka walaal wiilasha habaryartaa iyo adigu waxaad tihiin (Ilama habreed) wayna ku geeyaan, oo waad guursankartaa, macnaha way kuu bannaanyihiin, haddii aadan xagga aabaha iska xigina oo aanan qaraabo kale oo xagga aabaha ah idinka dhaxayn, habaryartaa wiilkeedu wuu ku geeyaa, sidaa darteed waa in aad ka xijaabato haddii ay xoogaabaan oo qaan gaaraan.
- Wednesday, December 28, 2005 at 17:20:17 (CST)
Su'aal: Wiilal habaryartay dhashay ma ka xijaabanayaa?
Salaamu calaykum, shekh waxan rabay in aan ogaado, wiilal aan soo koriyey oo Habaryartay dhashay ma ka xijaaban karaa? waad mahadsantahay.
- Wednesday, December 28, 2005 at 17:14:36 (CST)
Jawaab: Qaadiriyada iyo Axmadiyada maxay diintu ka qabtaa?
Walaal, Axmadiyada iyo Qaadiriyadu waa laba dariiqo oo ka mid ah dariiqooyinka Suufiyada dalkeenna joogta.
Labadaa kooxood si faahfaahsan ayaan horey uga hadlay oo webkan ayaad ka heli kartaa jawaabtaas, laakiin hadda waxaan ku leeyahay, labadaa dariiqo waa ahlusunno, mana aha dariiqo caqiido ah, shareecana maaha, ee waa dariiqo akhlaaqi ah suufiyadu. Marka ha isku khaldina diinka (caqiidada) iyo dariiqada suufiyada. Qofka suufiga ah wuxuu noqon karaa Ashcari ama maaturiidi ama muctasili ama xambali.
Xataa sheekh Cabdulqaadir laftiisu wuxuu ahaa Xambali markiisi hore, marka ha isku khaldina madaahibta islaamka, madaahibtaas qaar waa akhlaaqi sida suufiyada, qaar waa caqiido sida ashcariyada, qaarna waa fiqhi sida shaaficiyada.
Haddii qofku haysto mad-hab caqiido ah oo khilaafsan tii ahlusunnada ayaa islaamnimadiisa shaki gelayaa, laakiin haddii uu haysto mad-hab fiqhi ah ama suufi ah, taasi waxba ka dhibi mayso caqiidadiisu haddii ay toosantahay oo uu haysto caqiidadii ahlusunnada ee laga soo weriyay Imaam Ashcari iyo Imaam Maaturiidi.
Haddii caqiidadiisu Wahhaabi tahay, ama Shiico ama muctasilo, ama qaadiyaaniyo ama caqiido kale oo lunsan, markaas ayaan iswaydiinaynaa (islaamku muxuu caqiidadaas ka qabaa?) laakiin tasawufku caqiido ma aha, waa dariiqo akjhlaaqi ah, sidaa darteed, qofka suufiga wanaagsan ah wuxuu haystaa had iyo jeer caqiidadii ahlusunnada.
Marka su'aasha suufiyada islaamku muxuu ka qabaa? meesha kumaba jirto. Khayr baan kuu rejaynayaa.
- Tuesday, December 27, 2005 at 23:06:27 (CST)
Su'aal: Qaadiriyada iyo Axmadiyada maxay diintu ka qabtaa?
as/c, salaan ka dib, waxaan rabaa in la iiga jawaabo su'aasha ah, qaadiriyada iyo axmadiyada diintu mexeey ka qabtaa?
c/qadir xaani salaad <aayarluud>
- Tuesday, December 27, 2005 at 22:20:33 (CST)
Jawaab: Nin taariku salaad ah haddii aan musxafkiisa u celiyo ma dambi baa iga saaran?
Walaal Taarikusalaadka qofka ah ama qofka aanan soomayn kaafir ma aha ee waa faasiq, haddii uu aaminsanyahay in salaaddu waajib tahay oo soonku waajib yahay.
Wahhaabiyada iyo Khawaarijta iyo Muctasilada ayaa aaminsan in qofka taariku salaadka ah ama soonka ka taga kaafir yahay!! Laakiin hadalkoodu waa barkuma yaal, maxaa yeelay daliil looma hayo taas.
Muslimiinta ahlusunnada ah waxay aaminsanyihiin in uu faasiq yahay, waxaana sidaa caddeeyay Imaam Abuu Xaniifa iyo Abuu Jacfar al-warraaq oo ku qoray caqiidada daxaawiyada.
Marka ninkaas kitaabkiisa in aad siiso ayaa kugu waajib ah, maxaa yeelay kitaabka asiga ayaa leh, intii aad ka haysatay oo aad ku dheefsatayna waa in aad ogolaasho iyo cafis waydiisato.
- Tuesday, December 27, 2005 at 19:12:45 (CST)
Su'aal: Nin taariku salaad ah haddii aan musxafkiisa u celiyo ma dambi baa iga saaran?
A/c, marka hore walaalaha islaamka ahow illaahay ha idinka jazeeyo howsha aad umada u haysaan, anagana waan idin garab taaganahay.
Su'aashaydu maantay waa: "sheekhow nin aan salaaada tukan soonkii dhawaana aan hal maalin ka soomin ayaa kitaab qur'aan ah guri uga guuray. Nin kale oo ahludiin ah ayaa soo dagay gurigii, kitaabkii ayuu iska akhrisan jiray, markii danbe ayuu is yiri: bal ninkii idan waydiiso, ninkii taariku salaadka ma soomaha ahaana wuxu yiri: kitaakayga ii keen .. wali wixii uu ku jiray kama uusan bixin. Hadaan kitaabkii ku celiyo ma wax danbi ah ayaa iiga imanaya ninka noocaas ah?
- Tuesday, December 27, 2005 at 19:07:05 (CST)
Jawaab: Maxay wahaabiyadu diinka saxda ah u leexisaa?
Assalaamu calaykum: walaal Maryan, waad ku mahadsantahay ducada iyo taageerada aad inoo soo jeedisay
Haddii aan u gudbo su'aashaada ah maxay wahaabiyadu uga dan leeyihiin marka ay leexinayaan diinka saxda ah? walaal dadka wahhaabiyada sheegta wadaadnimadu diin kama aha ee dano gaar ah ayay ku wataan, badanaa ama lacag ayaa lagu siiyaa ama gabdhaha yaryar ayay wadaad isaga dhigaan si ay bilaash ugu guursadaan ayaga oo dhahaya dacwada ayaan idinkugu yeeraynaa.
Bal u fiirso dadka wahhaabiyada ku jira, badanaa dano gaar ah ayay wataan oo ama xoolo doon ah ama naago doon ah ama xukun jacayl ah.
Midda labaad, masjidyada iyo meelaha lagu cibaadaysto ayay had iyo jeer dhibaato ka dhalshaan sida aad adiguba u aragtay, sababtuna waa in ay fidno yihiin, oo muslimiinta kala gayntooda iyo isku dirkooda ayay ka shaqeeyaan, waxaa lacag siiya dowladda sacuudiga oo ay jawaasiis u yihiin badankoodu.
Marka walaal sida aad adiguba ula yaabtay ayaa muslimiinta wax fahmaysa ula yaabeen dadkan, qof Islaamka sheeganaya oo diinka akhrinaya isla markaana qalbigiisu qalbi gaalo yahay oo Islaamka dhibaya oo muslimiinta kala dilaya ayaad arkaysaa! sababtuna waa in ay dadkani u shaqeeyaan cadowga Islaamka.
Waxay ku dhiiradeen diinkii Ilaahay, cadaabtiisa ayaayse mutaysteen oo aakhiro geli doonaan, qofkii aanan Ilaahay ka cabsanayn wixii doono ayuu samaynayaa, dadkan alle kacabsi qalbigooda kuma jiro, maxaa wacay iimaan malaha oo badankoodu waa kufaar.
Hadaba walaal ka digtoonaada, intii islaam ahna u sheeg, ha iska jireen dadkaas, wahhaabiyadu islaam ma aha way lunsanyihiin, salaad laguma daba tukan karo, mana bannaana in la guursado nin wahaabi ah ama naag wahhaabi ah, wixii ay bireeyaanna waa xaaraan lamana cuni karo, marka sidaa ula socdo walaal, khayr ayaanna kuu rejaynayaa.
- Saturday, December 24, 2005 at 10:58:59 (CST)
Su'aal: Maxay wahaabiyadu diinka saxda ah u leexisaa?
salaan kadib, shiikh ilaah ayaan kaaga baryay in uu ku kor mariyo, cadawga islaamkana ku hoos dhigo, laakin maxay tahay danta ay ka leeyihiin qolooyinkaan wahaabiyada diinta saliimka ah ee islaamka ah ee ay leexinayaan? maxaysa masjidyada iyo meelaha lagu cibaadeesto ugu muujiyaan oo uga dicaayadeeyaan dadka wadada saxda heesto? maxay tahay danta ee ka leeyihin oo alle kacabsi ka aheen? marka shiikhow waxa aan la yaabanahay dad diinka wax ka yaqaan oo ammaano ka aheense sidee cadaabka alle ugu dhiiranayaan? waadna mahad santhay.
maryan c/qaadir <maryan994>
- Saturday, December 24, 2005 at 10:47:48 (CST)
Jawaab: Ma la dhihi karaa Ilaahay Carshiga ayuu ka sarreeyaa?
Assalaamu Calaykum: Walaal qofka sidaa leh haddii uu erayga "ka sarreeyaa" u fahmayo "ka korreeyaa" oo uu u malaynayo in uu Ilaahay jihada sare jiro, ma bannaana taasi, lamana dhihi karo Ilaahay carshiga ayuu ka sarreeyaa, haddii aad taas ka waddo wuu ka korreeyaa oo jihada sare ayuu ka sii xigaa, maxaa yeelay Ilaahay jiho gaar ah looma nisbayn karo.
Laakiin haddii aad taas ka waddo, Ilaahay carshiga wuu ka sarreeyaa awood ahaan iyo sharaf ahaan, ama aad ka waddo Ilaahay carshiga asiga ayaa sameeyay ama maamula iwm, waa sax waana bannaantahay in la yiraahdo.
Marka waxaa muhiim ah in aanan loo fahmin hadalkaas in Ilaahay jiho leeyahay, maxaa yeelay qofkii Ilaahay jiho u nisbeeya waa shabbahay, qofkii shabbahana waa kufriyay.
- Saturday, December 24, 2005 at 10:43:31 (CST)
Su'aal: Ma la dhihi karaa Ilaahay Carshiga ayuu ka sarreeyaa?
waxaan idin wey diinayaa: mala dhihi karaa ilahey carshiga ayuu ka sareeyaa.
- Saturday, December 24, 2005 at 10:39:05 (CST)
Jawaab: Carruurta garaaciddooda kolka wax la barayo ma bannaantahay?
assalamu calaykum: Walaal carruurta in la edbiyo oo mararka qaar la garaaco waxba kuma jabna haddii uusan garaacaas ahayn mid dhibaato jirka ah u gaysanaya.
Laakiin waxaan kugula talinayaa: 1.In aad waalidka ogolaasho ka hesho.
2. In aad ka fogaato garaacidda intii tabartaa ah, oo aad adeegsato dhiirrigelin ama cabsiin, sida adiga oo ku yiraahda carruurta "ninkii horta dhameeya shaqada wuxuu leeyahay hadiyad" ee kolkaa siiya wax yar oo ay ku farxaan sida "nacnac" iwm.
Sikastaba ha ahaatee, haddii aad waalidka ogolaasho ka haysato, oo uu kuu fasaxay in aad adeegsato garaacidda si aad quraanka u barto carruurta adiga oo aan ku xadgudbayn, wixii garaaciddaa ka yimaada sharci ahaan wax dambi ah kaama saarra.
- Saturday, December 24, 2005 at 10:37:28 (CST)
Su'aal: Carruurta garaaciddooda kolka wax la barayo ma bannaantahay?
waxan jec laan lahay waxan ahay macalin dugsi quran marka ardayda waan garacaa mar marka ay wax aqri waayan marka maxey diintu ka qabtaa waxii ka yimadaa garacaa?
- Saturday, December 24, 2005 at 10:31:45 (CST)
Jawaab: Lacagta uu nin madax ah i siiyay si aan warkiisa u fidiyo ma xaaraan baa?
Assalaamu Calaykum: Walaal, haddii aad joornaaliiste tahay oo ninkaa waxa uu sheegayo aad si fiican u qorto adiga oo aanan been ku derin oo aanan xaqeeqada sida ay tahay waxba ka bedelin, oo aad sidaa lacag ku qaadatay, lacagtaasi waa xalaal, waadna xoogsatay, islaamkuna wuu banneeyay in la xoogsado.
Laakiin haddii aad been sheegtay adiga oo ninkaas wax uusan dhihin sheegaya ama xaqeeqada ka been sheegaya, xoolihii aad sidaa ku qaadato waa xaaraan walaal.
Marka, waxaa muhiim ah in aad xaqeeqada sheegto oo aadan been sheegin. Khayr baan kuu rejaynayaa.
- Saturday, December 24, 2005 at 01:34:34 (CST)
Su'aal:Lacagta uu nin madax ah i siiyay si aan warkiisa u fidiyo ma xaaraan baa?
Aniga Waxa aan ahay Saxafi ama Wariye Ka Hawl Gala Warbaahinta Aduunka Iyo Mida Somaaliyaba. Waxaa Dhacda Badanaa In Nin Qabqablaa Ama Siyaasi Caadiya Ama Nindawlad Wasiir ka ah oo Katirsan Dawlad uu Shirjaraaid Qabto Isagoo Shirkisaasna Waxa uu rabo Kaga Hadla, Haduu rabo Dad Caaya Haduu Rabo Fikir kiisa Kusheega, Haduu Rabo Dad kutaageera Aniga wariyaha ah Waxaa lagayabaa in uu isiiyo Xogaa oo uu jeebkiisa iga siiyo isagoo Doonaaya in aan warkiisa Ufidyo iguna Soojiidanaaya Aniga Waayahay Ayaan iri oo lacagtii uu isiiyey Nin kaas Ayaan cunay Siduu rabayna Warkisii Waan ugushegay war kaas oo lagayaabo in uusan wanaagsanayn Shiikhow Waxa aan kaa rabaa Lacagtaas Waxa ay diintu kaleedahay Maxaraan baa Mase Waa xalaal? Shiikhow isoo kala saar Adoraaliya. Amaana Allah.
Jamal Maxamuud <Shuurye55>
- Saturday, December 24, 2005 at 01:05:30 (CST)
Warqad ka timid ilaaliyaha qabriga Nabiga..!
Assalaamu calaykum; Walaal Dulmar, warqadda aad sheegtay qaar la mid ah oo badan ayaa dhowr jeer lagu fidshay muslimiinta dhexdooda, ayaga oo ay ku qoranyihiin waxyaabo badan oo jaadkaas ah.
Waxay dadka warqadahaas qora xujo ka dhigtaan waxyaabaha soo socda:
1. In ay warqaddu ka timid dadka ilaaliya ama u adeega kacbada ama masjidka Nabiga.
2. In qofka warqaddaasi ka timid uu arkay riyo, riyadaas oo ama cabsi sheegaysa sida midda aad hadda sheegtay ama rejo fiican sheegaysa.
3. In warqadahaasi sheegayaan in qofkii aanan fidin warqaddaas ay dhibaato qabsan doonto.
Saddexdaas astaamood ayay wadaagaan waraaqaha jaadkan ah, waxaanna uga jawaabaynayaa sidan:
1. Marka hore waa in aan ogaanno in aanay dadka u adeega kacbada ama masjidka nabiga aanay qorin waraaqo ay u dirayaan muslimiinta, wax arrinkaas daliil u ahna lama hayo.
2. Haddii ay dhacday in ay dadkaasi warqad qoreen, taasi waxba macne ah malaha, maxaa yeelay dadka u adeega masaajidyadaas dadka kale waxba kagama duwana.
3. Riyada ay arkeen ee ay sheegayaan wax daliil ah oo xaqeeqo ah kuma sugna, maxaa yeelay diinku riyo kuma dhisna, ee daliil sharci ah buu ku dhisanyahay.
4. Qaddexra Ilaahay baa haya, qofkii xumaan ku dhacdo ama wanaag hesha, taasi Ilaah xaggiis uun bay ka ahaatay ee cidkale oo keenikarta nafci ama dhibaato ma jirto.
Sidaa darteed, waxaan ku leeyahay, waraaqaha noocaas ah wax dan ah haka gelin, hana fidin waqtigaagana ha ku lumin.
Sh. Dr. Hersi Aw Mohamed <labagarre>
- Saturday, December 24, 2005 at 00:52:28 (CST)
Asalaamu calaykum, sheekh waxaa i soo gaadhay warqad ka imaatay wadanka sucuudiga, oo la leeyahay waxay ka imaatay sheekh Axmed daadow ilaaliyaha Qabriga nebiga calayhi afdalu salaati wasalam, waxaa ku qoran ninkaasi markuu tukaday wakhti habeen ah salatul layl kadib nebiga ninka wuxu ku yidhi sheekh axmed daadoow 6,000,000 oo qof ayaa dhimatay qofna janada kama galin, waxa kale oo ku qoran wax yalo fara badan oo ay kamid yihiin nin ayaa warqadan helay ma uusan muhiim garayn oo kabadh ayuu iskaga riday wuuna ku hilmamay kadib shaqadii ayaa laga caydhiyey, ayaamo kadib ayuu xasuustay warqadii wuuna badiyey oo dadka muslimiinta ah u qaybiyey markas kadib shaqadii tu kafiican ayuu helay, warqadaan waxaa ku qoran wax yaalo kale oo aanan halkaan ku soo koobi karin, marka shiikhow dadku waxay leeyihiin qarkood waxba kama jiraan ee ha rumaynina, dadna waxay leeyihiin, halabadiyo oo waa run, marka fadlan i soo nuuri, Illaah janadii ha kuugu bishaareeyee.
- Saturday, December 24, 2005 at 00:43:54 (CST)
Jawaab: Nin wahhaabiyada Nairobi sheekh u ah ayaa iftooday...
Assalamu Calaykum; Walaal hadalka ninkaasi sheegay ee ah in shahwada oo gacanta laysaga keeno bannaantahay oo aanay soonka burrinayn waa hadalkii Ibn Xizam uu ku qoray kitaabkiisa al-Muxallaa, Ibn Xizamna waa nin "Daahiri" ah oo la wadada ogyahay, ra'yigiisuna waa fallaago oo culumada ayuu khilaafaa.
Wahhaabiyadu waxay diin ka dhigataa figradaha fallaagada ah ee laga soo weriyay dadka ama firqooyinka qaarkood ayaga oo ka leexanaya ijmaaca culumada ahlusunnada iyo waxyaabaha culumadu isku waafaqday ee muslimiintu isku raaceen.
Waxaa kale oo banneeyay in shahwada gacanta laysaga keeno Axmad Bin Xambal iyo Xanafiyada qaar ka mid ah, laakiin waxay u banneeyeen daruuro ahaan.
Ibn Xisam wuxuu ku murmay in aan wax daliil ah loo hayn xaaraamaynta seegaysashada, wuxuu yiri miyaanay bannaanayn in ninku guskiisa gacanta ku taabto? shahwada soo bixinteeduna dambi maaha, marka seegaysashadu dambi maaha xaaraanna maaha sidaas ayuu ku murmay.
Axmad Bin Xambalna wuxuu ku murmay in shahwadu tahay waxyaabaha jirka dheeraadka ku ah sida candhuufta iyo xaakada iyo kaadida iwm, oo ay bannaantahay soo bixintoodu.
Sikastaba ha ahaatee, Imaam Shaafici ayaa caddeeyay in seegaysigu xaaraan yahay daliilkiisuna waa: aayadda 5-7ad ee al-mu'minuun iyo aayadda 29-31aad ee al-Macaarij, iyo xaddiiska al-bukhaari iyo muslim soo weriyeen ee amray in uu soomo qofkii guursan kari waaya.
Sidoo kale waxaa xaaraameeyay siigaysiga Maalikiyada waxayna daliilsadeen xaddiiska aan soo sheegay, asaxaabta sida Ibn Cabbaas iyo Ibn Cumar iyo culumada badankoodu sida al-Qurdubi uu tafsiirkiisa ku sheegay waxay qabaan in siigaysigu xunyahay oo uu ceebyahay oo uu akhlaaq xumo yahay, oo xaaraan yahay, haddii aan daruuro qofka u gayn, wuxuu yiri Ibn Cabbaas wuxuu siigaysigu dhaamaa sinada ibn Cumarna sidoo kale wuxuu yiri: nin siigaystay waa sidi nin iswasay oo kale.
Marka walaal waxaa waajib ah in la raaco hadalka culumada lagu kalsoonyahay ee lama raaco hadalka dadka fallaagada (shaadka) ah qoreen sida Ibn Xizam.
Wahhaabiyadu waa fallaago
Kolka wahhaabiyadu walaal waa fallaagu, waxay raadsadaan figradaha habowsan ee liita ee daciifka ah kolkaas bay diin ka dhigtaan. Bal u fiirso ma wax wanaagsan baa in aan ku dhiirigelino dadka sooman in ay siigaystaan!! subxaana laahi, akhlaaq xumadaas xagee ka keeneen.
Siigaysi kaliya ma bannayn wahaabiyadu ee waxay xataa banneeyeen qaniisnimada, waana ururka diiniga ah ee adduunka u banneeyay xubnahoodu in ay qaniis ahaadaan, xataa nasaaradu uma ogola in uu xubin ka noqdo kaniisadda qof qaniis ah, wahhaabiyaduna way bannaysay oo qaniisnimadu dambi kama aha agtooda, subxaana laah, ilaahow adigaan kaa magan galnay diintaas qaniisnimada ah ee wahhaabiyada.
Hadaba walaal qofkii sida aad sheegtay dadka ku dhiirigelinaya falalka xunxun sida siigaysiga waa faasiq xukunkiisu, markhaati ma galo, salaaddii lagu daba tukadaana ajar malaha haba yaraadee.
Marka waxaa waajib ah in laga digo dadka noocaas ah ee fasahaadinaya akhlaaqda dhallinyarada ee ku dhiirrigelinaya siigaysiga waqtiga soonka la joogo.
- Thursday, December 22, 2005 at 19:49:18 (CST)
Su'aal: Nin wahhaabiyada Nairobi sheekh u ah ayaa iftooday...
Walaale waxaan shiikha waydiinayaa, shahwada oo gacanta la isaga keeno sharcigu muxuu ka qabaa? -nin wahaabiyada Nairobi shiikh u ah, ayaa wuxuu soonkii dhawaa iftooday, in hadii uu qofku shahwada gacanta isaga keeno maalinta soon aysan waxba ku jabnayn, ninka waxaa iftoodayna maxay diinta ka qabtaa?
- Thursday, December 22, 2005 at 18:01:50 (CST)
Jawaab: Nin aan aabbahay ahayn, aabbe ma ugu yeeri karaa?
Assalamu Calaukum: Walaal su'aasha hore ee ah nin aan aabbahaa ahayn aabbe ma loogu yeeri karaa, jawaabteedu waa in Islaamku faray in qof kasta aabbihiisii runta ahaa loogu yeero, marka haddii aad aabbe ugu yeerto ninkaa ku soo koriyay adiga oo ixtiraam ka wada taas waxba kuma jabna, laakiin waxaa muhiim ah in uu asigu kuugu yeero magacii aabbahaa.
Marka haddii aad ogtahay in uusan aabbihii runta ahaa ahayn, asiguna kuugu yeero aabbahaa magaciisi runta ahaa oo sidaa kugu magacaabo oo uusan magaciisa ku bedelin magacii aabbahaa taas waxba kuma jabna ooaabbe waad iska dhihi kartaa ixtiraam ahaan, maxaa yeelay aabbe looma yaqaan aabbaha runta ah oo kaliya ee aabbe waxaa lagu magacaabaa qofka mas'uulka ah, tusaale ahaan, aabbaha umaddu waa madaxwaynaha, aabbaha arrintuna waa ninka goynaya arrinka, marka erayga aabbe siyaabo kaladuwan ayaa loo adeegsadaa.
Waayahan dambe waxaa dadka lagu magacaabaa magacyo aan ahayn magacyadii dadkii dhalay ee runta ahaa, siiba dadka u soo haajiray wadamada reergalbeedka, waxaan aragnay carruurta waxay siinayaan magacooda iyo magaca qoyska ama falilka marka haddii qofka magaciisu ahaa Xasan cali Aadan, waxay ku magacaabayaan Xasan Aadan, ayaga oo magacii aabbaha ka tegaya, marka waxyaabahaas oo dhan waa bannaanyihiin maxaa yeelay taas macnaheedu ma aha in la inkirayo xaqii aabbaha runta ahaa ee waa caadooyin ay dadku isku barteen.
Su'aasha labaad: ee ah surwaal ma ku ciyaari karaa riyaadada? walaal surwaalku waa dhar wanaagsan, wuxuuna la mid yahay dharka kale ee ay bannaantahay in la xirto, waxbana kuma jabna in aad xirato maadaama uu cowrada qarinayo oo uu surwaal dheer yahay. Surwaalka xirashadiisu u gaar ma aha ragga, daliil caddaynaya in uu ragga u gaaryahayna ma jiro, sidaa darteed waa dhar ka dhaxeeya ragga iyo dumarka, wuxuu la mid yahay, shaararka, koofiyadaha, kaba buudka ah iyo qaar badan oo ragga iyo haweenku wadaagaan, marka waxba kuma jabna in aad surwaal xirato ama riyaado ciyaar ama caadi u xiro ee surwaalka xirashadiisu haweenka way u bannaantahay.
- Wednesday, December 21, 2005 at 17:53:57 (CST)
Su'aal: Nin aan aabbahay ahayn, aabbe ma ugu yeeri karaa?
Asalaamu calaykum, sheekh waxaan aabbe dhahaa nin aan idhalin laakin isoo korsaday anoo ilmo yar ah ila hada, marka aabbe madhihi kara mise waa danbi?
Su'aasha labaad: iskuulka waxaan riyaadada ku dheelaa surweelo markaan dhamayno xisada wan badellnaa, markaa taas maxaa ka jira, shukran shekh.
- Wednesday, December 21, 2005 at 17:40:01 (CST)
Jawaab: Gabadh ilma iska soo ridaysay ayaan lacag ugu kaalmeeyay, marka ma dambi baa iga soo gaaraya?
Assalamu Calaykum; Walaal gabadha aad sheegayso haddii ay carruurta iska soo ridday ayaga oo 120 maalmood ka yar culumadu way banneeyeen.
Culumadu waxay dhaheen cunuggu 40 ka maalmood ee ugu horreeya wuxuu ahaanayaa xab, 40 ka kale ee ku xigana wuxuu ahaanayaa dhiig, 40 ka kale ee ku xigana wuxuu ahaanaa cad (hilib ah), intaasi waa 120 maalmood, intaa kadib ayaa nafta ama ruuxa la gelinayaa.
Marka culumadu waxay qabaan in ay bannaantahay in cunugga la soo rido haddii uusan 120 maalmood ka waynayn, haddii uu ka waynaado waxay isku raaceen in aanay bannaanayn in la soo rido.
Hadaba walaal haddii aad gabadha waqtigii aad u kaalmaysay ee ay ilmaha soo ridday ay ahaayeen 120 maalmood ama ka yar, wax dambi ah kaama saarna kaalmihii aad gabadhaa u gaysatayna ajair in Ilaahay kaa siiyo ayaan rejaynaynaa, haddii ay ahaayeen carruur 120 maalmood ka wayn, ma bannaana in la soo rido, mana bannaana in aad ugu kaalmayso qof kale wax xaaraan ah, haddii aad fashay oo aqoon la'aani kuu gaysayna waa in aad ka toobadkeento oo Ilaahow i cafi tiraahdid mar kalena aadan u laaban.
- Wednesday, December 21, 2005 at 17:31:46 (CST)
Gabadh ilma iska soo ridaysay ayaan lacag ugu kaalmeeyay, marka ma dambi baa iga soo gaaraya?
Asalaamu Calaykum.Walaal waxaan raba in aan ku waydiiyo arrin aan ugu fikiraayo in muddo ah. Arrintu waa sidan: Waxaa aan ku noolahay wadan qurba ah, waxaa ii timi Gabar aan deris nahay, waxayna tiri: waxan leeyahay uur. Uurka qofka ay uu leedahay iima sheegin. Waxay tiri waxaan go'aan saday in aan Ilmahaan iska soo rido, marka igu caawin lacagta aan isbitalka ku tegi laha. Aniguna diinta aqoon badan uma lihi, Aniga oo aan arrintaas si fiican uga fikirin ayaan lacagti siiyey, kabacdiina ilmihii ay iska soo riday..Arrintaas iyada ah waxaa ii geeyay jaahilnimo, yacni ma wanagsana in aan lacagta ku caawino..In muddo aad iyo aada ayaan arrintaas uga fikiray, dhib wayn iyo hurda la'aan ayey igu haysaa. Marka waxan ka wal walaa in aan galay dembi wayn. Mar mar waxaan is iraahdaa, waxaad gashay dhiig...marka maxaad i oran lahayd, dhiig miyan qaba? su'aashaas iga soo jaahil bixi..Ilaay khayr ha kusiiyo..Wal wal daraadiis noloshii oo dhan ayaa igu adkaatay...mahadsanid
- Monday, December 19, 2005 at 16:39:58 (CST)
Bogaadin: Aad baad u mahadsantihiin Dr. Hersi iyo dhallinyarada la shaqaysa..
Walaale Dr.iyo dhamaan dadka ka la shaqaynaya sit-ka ayaan u gudbinayaa farxadayda ka dib markaan caawa google ka helay site-ka oo ah mid qaali ah oo ay somalidu u baahnayd hadan mar hore asxaabta ahlusunah waljaamca ayaa emailo u diray si ay ugu faa'iidaystaan. allaah khayr ha idiiku abaal mariyo.
- Sunday, December 18, 2005 at 16:05:16 (CST)
Jawaab: Aniga iyo adeerkey waxaan iskula hadalnaa hadal jacayl ah ninkayguna ma ogola
Assalaamu Calaykum; walaal waalidku ama adeer ha ahaado ama qof kale ha ahaadee luqad lagula hadlo ayuu leeyahay, luqadaasina way ka gedisantahay luqadda lagula hadlo ninkaaga ama dadka kale ee shisheeyaha ah.
Sidaa darteed waxay culumada fiqhigu dhaheen ma wanaagsana in ninku naagtiisa ku yiraahdo "walaal" maxaa yeelay eraygaas wuxuu u adeegsanayaa walaashii runta ahayd, laakiin middan uu qabo waxaa wanaagsan in uu eray kale u adeegsado. Macnaha waxay ka wadaan waxaa wanaagsan in laga fogaado erayada dhalinaya shakiga iyo malaha xun.
Marka waxaan ugula talinayaa in aad adiga iyo adeerkaa adeegsataan luqad toosan oo shaki ku jirin, sida maandhey, gabadhaydi, adeerow, iwm.
- Thursday, December 15, 2005 at 17:19:30 (CST)
Su'aal: Aniga iyo adeerkey waxaan iskula hadalnaa hadal jacayl ah ninkayguna ma ogola
Aniga iyo adeerkeeyga waxaan iskula hadal naa lawo qof oo is jacal qofkii na arkonah waxuu u maleynaa in aan isjacalnahay dadka qaarkood weynaga shakiyaan waxaan ku hadalnaaa hadalada istacmaalaan lawada qof oo isjacal wil iyo gawar oo ka mid ah xabibtii i love you i miss you haweenkii markaan jifaneyno telfon ayaan isku soo dirnaaa oo an ois dhanaa tosbax calaa qeyr subaxii markii an soo kacno waan is soo wacnaa waxaaan is dhahnaa sabaaxal qeyr intaan an sameeynaayo neh ninka i qawo ma ku faraxsano marka maxaan sameeyaa dintaneh maxeey ka qabtaaaa
- Thursday, December 15, 2005 at 17:14:10 (CST)
Jawaab: Waalidkayga ayaa igu yiri: Bax qooq ayaa ku haayee..!
Assalamu Calaykum; Walaal, waalid xuquuq badan buu leeyahay, siiba haddii ay ayaga oo gaboobay kula joogaan, marka waxa ugu horraysa ee aad ku dadaalayso waa in aad baarri u ahaato, waxaana baarrinimada ka mid ah in aadan hadal xun ku dhihin.
Haddii ay kugu dhahaan hadal aadan jeclayn sida midka aad kor ku sheegtay waxaa kugu waajib ah in aad u dulqaadato maxaa yeelay waxaa laga yaabaa in ay kaftan iyo caraadis kuu leeyihiin hadalkaas, inkasta oo aanay wanaagsanayn in waalidku ku kaftamo ama ku caraadsho carruurtooda hadal xun ama erayo caay ah.
Marka walaal diintu waxay ina faraysaa in aan waalidka wax fiican ku dhahno oo aan si fiican ugu abaalgudno maxaa yeelay xuquuq badan bay inagu leeyihiin. Marka haddii ay wax xun kugu dhahaan waxaad ku dhahdaa "Ilaahay ha ku saamaxo ama Ilaahay ha ku cafiyo hooyo ama aabbe" sidaas ayaad ugu jawaabaysaa. Haddii aad fursad u hesho oo aad aragto ayaga oo faraxsan markaa waad la talin kartaa oo waxaad ku dhihi kartaa sidani ma wanaagsana.
- Thursday, December 15, 2005 at 17:11:18 (CST)
Waalidkayga ayaa igu yiri: Bax qooq ayaa ku haayee..!
waalidkeeyga ayaa i yiri bax waad qooq ayaa ku haayo, waxaad u baahan tahay wiil iyo wax la mid ah, aniganah waxaan ugu jawaaway adiga ayaa waxaan sameesa hadii as arintaa as markasto ila imaado, maxaan ku sameen karaa mase maxaan dhihi karaaa?
qadro <qadro 22>
- Thursday, December 15, 2005 at 16:57:08 (CST)
Jawaab: Wahhaabiyadu waxay kuu baxsheen (Maxamad guuleed al-thaani)!!
Assalaamu Calaukum: Walaal xasan, horta Sharaf bay ii tahay in la igu magacaabo Maxamad Guuleed al-Thaani maxaa yeelay Sheekh Maxamad Guuleed wuxuu ahaa caalim wayn oo dad badan ka faa'iidaystay, aniguna inkiri maayo in aan ardaygiisii ahay oo tafsiirka ayaan ka dhagaystay khayr allaha siiyee intii aan soomaaliya joogay.
Kooxda Itixaadka ee aad sheegtayna anigu waxba uma dhibin ee waxay igu diidayaan runta aan sheegayo. Anigu xaqeeqada ayaan ka hadlayaa, culumadeenii sida Shiikh Maxamad Guuleed iyo Sheekh Aadan Sheekh Cabdullaahi iyo Sheekh Ibraahim Suuleey oo dhammaantood aan duruus badan ka dhagaysatay ayaana igu barbaarshay runta sheegiddeeda iyo in aanan cilmiga been laga sheegin, marka ninkii xaqa in la sheego diidaya taasi asiga ayay jirtaa.
Shiikh Maxamad Guuleed Tafsiirka ayaan ka dhagaystay, sidoo kale waxaan ka dhagaystay tafsiirka Sheekh Maxamad Macallin 1975kii intii uusan mad-habta ikhwaanka gelin, sidoo kale waxaa fiqhiga inoo dhigay sheekh Ibraahim Suuleey intii aan ku jiray dugsiga sheekh suufi, wuxuuna ahaa macallinka soomaaliga ah oo kaliya oo markaa dugsiga joogay inta kale waxay ahaayeen Carab.
Marka Culumadaas iyo qaar kale oo badan ayaan diinka ka qaadanay, mana bannaana in aan kufrino culumadeenna oo aan abaalkoodii ka inkirno, ee waxaa waajib ah in aan u mahadcelino oo u ducayno cilmigoodiina ka faa'iidayno.
Itixaadku waxay caabudaan wadaaddo carbeed oo lakala yiraahdo Ibn Taymiyah iyo Ibn Cabdulwahhaab, culumada soomaalida ah oo dhan way kufriyeen, marka sidee ula heshiinaynaa dad kufrinaya culumadii diinka ina soo baray?!
Fidnada yaa wada?
Jimcihii la soo dhaafay ayaan ku tukaday salaaddii jimcaha meel la yiraahdo Aubern oo ku taalla magaaladan Sydney ee Australia, markaas baa wiil ka mid ah dhallinyarada igu yiri: Ditoore, sheekhow kooxda al-Itixaad aad bay kaaga cabanayeen ee nimanka maad sida u dhaantid!! Waxaan ugu jawaabay: anigu fidno ma wado ee qolada fidnada wadda ha joojiso fidnada.
Anigu in kasta oo dadaalkayga iyo cilmigaygu igu qanciyeen in ay wahhaabiyadu mad-hab khaldan tahay, hadana qofkii raacsan ee aan dhibaato dadka u keenayn anigu doonan maayo, Laakiin qofkii dadka kufriya ee afdheer la yimaada, ee yiraahda aniga uun baa Islaam ah inta kalena waa gaalo, waxaan tusayaa in uu asigu gaal yahay inta kalena muslimiin yihiin.
Marka haddii ay nimankan Itixaadka ah ka mid ahaadaan muslimiinta oo dadka la tukadaan oo dhibaatada joojiyaan oo aanay dadka kufrin annagu waxba u sheegan mayno, inkasta oo aan aaminsanahay in mad-habtoodu kufri tahay, hadana annagu soo doonan mayno haddii aanay ayagu bidcadooda iyo kufrigooda inala soo doonan.
- Tuesday, December 13, 2005 at 19:50:05 (CST)
Su'aal: Wahhaabiyadu waxay kuu baxsheen (Maxamad guuleed al-thaani)!!
Sheekh Xirsi bacda salaan adiga aadaa ugu darraatay nimanka al-ittixaad waxayna kuu yaqaanaan Maxamad guuleed al-Thaani, oo waxay maqleen in uu Sheekh Maxamad Guuleed ahaa Shiiqaagii ee arrinkaas maxaa ka jira?
- Tuesday, December 13, 2005 at 18:58:24 (CST)
Jawaab: Qofkii dhaarta ee dhaartiisa burriyay xukunkiisu muxuu yahay?
Assalaamu Calaykum: Walaal dhaarta shuruudaheedu waa sida soo socota:
6. In waxa uu faliddooda ku dhaaranayo ama ka dhaaranayo ay yihiin wax mustaqbalka dhici doona oo aanay ahaan wax la soo dhaafay. Shuruudahaas marka la helo ayaa dhaartiisu sax noqonaysaa, haddii uu kolka dhaartiisii fulin waayay ama wixii uu ka dhaartay sameeyo waxaa ku waajibaya fidyo waana sida soo socota:
- Monday, December 12, 2005 at 17:57:18 (CST)
Su'aal: Qofkii dhaarta ee dhaartiisa burriyay xukunkiisu muxuu yahay?
Asalaamu calaykum waraxmatulaah, sheekh Qofku hadii uu Musxafka ku dharto in uu sir sheegin lagu aaminay islamarkaasna ay dan ugaysay in uu sirtii sheego maxaa kajira, maxayse ciqabteedu tahay?
- Monday, December 12, 2005 at 17:56:46 (CST)
Jawaab: Xijaabka haweenku waa noocee?
Assalamu calaykum, walaal xijaabka haweenku wuxuu noqon karaa dhar kasta oo cowrada haweenka qarinaya, cowrada haweenkuna sida kutubta fiqhiga ku xusan waa jirka oo dhan intaan wajiga iyo gacmaha ahayn. Marka shardi maaha in ay jaad gaar ah qaataan haweenku ee waxaa muhiim ah in uu dharku cowrada qarinayo.
Waxaad xiran kartaa cabbaayad, ama guntiino, ama cabbuur ama sarwaal iyo funaanad dhammaan waa dhar fiican oo la xiran karo maadaama uu qarinayo jirka oo dhan. Shardi ma aha in aad xirato maryaha waawayn ee haweenka soomaalidu maalmahan dambe moodada ka dhigteen, waayihii hore hooyooyinkeen iyo gabdhihii inala dhashay waxay xiran jireen guntiinooyin iyo safaleeti iyo garba saar waana fiicnaa dharkaas waxba kuma jabnayn maxaa yeelay waa dhar cowrada qarinaya oo qurxoon.
- Monday, December 12, 2005 at 17:56:04 (CST)
Su'aal: Xijaabka haweenku waa noocee?
Asalaamu calaykum warax matulaai wabarakaatuh. Sayidinaa sheekh waxaan rabaa in aan ogaado Xijaabka gabdhaha muslimiinta ah mawaxaa laga wadaa kan weeyn ee somalidu xidhaan mise wax kasta oo jidhkaaga asturaaya masalan cabaayadaha ay sucuudiyiintu xidhaan oo kale. waa mahadsantahay.
- Monday, December 12, 2005 at 17:55:16 (CST)
Jawaab: Meel ay kaniisaddu leedahay ma lagu tukan karaa?
Assalamu calaykum; Walaal waxba kuma jabna in lagu tukado meesha aad sheegtay, maadaama aad ka kiraysateen laakiin waa in la hubiyo in meeshaasi daahir tahay, maxaa yeelay dadkaas nasaarada ah haddii ay halka u adeegsadaan maalmaha kale cabitaan ama cunitaan oo ay khamri ama khaanziir ku cunaan oo ku caab oo ku daadshaan sidee loogu tukanayaa?
Marka walaal waa lagama maarmaan in aarinkaas lagala hadlo kaniisadda oo loo sheego shuruudaha Muslimiinta, oo waliba muslimiintuna hubiyaan in meeshu daahir tahay, haddii kale salaaddiina waxba kama jiraan. In meesha lagu tukanayo ay daahir ahaato waa shardi aasaasi ah oo aan salaadda looga maarmun, marka qodobkaas waa in muslimiintu hubiyaan. Inta kale waxba kuma jabna oo way ansaxaysaa salaaddoodu haddii ay ku tukadaan halka ay kaniisaddu leedahay haddii uu daahir yahay.
- Sunday, December 11, 2005 at 17:37:04 (CST)
Su'aal: Meel ay kaniisaddu leedahay ma lagu tukan karaa?
Walaal aniga waxaan salaada jumcaha ku dukadaa meel ay i jaartaan muslimiinta meeshaas oo ay iska leedahay kaniisad, korna waa kaniisad ama dhinaca waa kanisad meesha an ku dukananah waa hool ay iska leedahay kaniisaddu, marka musliminta ayaa halka jumco i jaarto si looga dukto salaada jumcaha marka malagu dukan karaa. macsalaamo
- Sunday, December 11, 2005 at 17:32:09 (CST)